SomaliTalk.com » shiinaha
Home » Qoraallada Halkudhegga "shiinaha"
Shiinaha oo Safaaradiisii 24 kadib Soomaaliya dib uga furtay
Shiinaha ayaa markale dib uga furtay safaaradiisii Soomaaliya mudo dheer kadib, labada dalba waxay ku tilmaameen in dib u furida safaarada ay muhiim u tahay xiriir koodana xoojin doonto. Safiirka loo magacaabay Soomaaliya ayaa ku hadla luuqada Soomaaliga. Qoraal aan kasoo turjunay (Xinhua) ayaa wuxuu u qoraa sidatan. MOGADISHU, Oct. 12 (Xinhua) “Shiinaha ayaa Axada dib uga furay safaaradiisii...
Bandhigga Carwada ugu weyn adduunka ee Shanghai oo Soomaaliya ka qayb gashay
Carwada Shiinaha oo soo bilaabatay May 1 – October 31, 2010 waxaa Soomaaliya u matalay magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari…. Xarunta ganacsiga ee China ee Shanghai waxaa ka socda bandhig dhaqameed iyo ganacsi lagusoo bandhigay dhaqamada Aduunka si China oo noqotay xarunta ganacsiga aduunka ay u gu soo bandhigaan dadkooda wadamada uu gaaray ganacsigooda iyo inay fahmaan dhaqamada wadankaas...
Halkudheg: china, shiinaha
Shir balaaran oo ay isugu Yimaadeen Soomaalida ku nool dalwaynaha shiinaha.
iyo Ganacsato Soomaaliyeed oo heshiis hor-u-dhac la galay Ganacsato reer Turkey ah… … Warbixin: Shiinaha: Kulan ballaaran oo ka dhacay Gobolka Hubei Waxaa dhawaan ka dhacay Magaalada Wuhan ee Gobolka Hubei ee dhul waynaha shiinaha, kulan balaaran oo ay isugu yimaadeen soomaali ku kala nool Gobolada kala gadisan ee shiinaha. Kulankaan ayaa waxaa ka soo qeyb galay safaarada Soomaalida ee...
Halkudheg: shiinaha, turkiga